स्वास्थ्य – Page3– Ruru FM
आज विश्व मृगौला दिवश: मृगौला रोगको लक्षण, बच्ने उपाय र रोग लागेमा के गर्ने ??
मृगौला रोग भनेको के हो ? मृगौला भनेको हाम्रो शरीरको पेटको पछाडि ढाडको दुवैतिर रहेको दुईवटा महत्वपुर्ण अंग हो । हाम्रो जिवनमा यसकोमहत्वपुर्ण भुमिका छ । यसले हाम्रो रगतमा भएको फोहोर र बढी मात्रामा भएको पानीलाई पिसावबाट फालेर रगतसफा राख्दछ…
सामाजिक विकास मन्त्री बराल वाट, लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रसुती गृहको शिलान्यास !
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रसुती गृहको शिलान्यास गरिएको छ । प्रसुती गृहको प्रदेश नम्बर पांचका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले आज धार्मिक विधिधपूर्वक प्रसुती गृहको शिलान्यास गर्नुभयो । त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री बरालले…
लायन्स क्लव गुल्मीले रुरु क्षेत्र र छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन…
फागुन २१,गुल्मी । लायन्स क्लव गुल्मीले रुरु क्षेत्र गाउँपालिक र छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ । रुरु क्षेत्र गाउँपालिक र छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मी सँगको सहकार्य तथा ग्रिनसिटी अस्पताल काठमान्डौ…
रुघाखोकीले ग्रस्त हुनुहुन्छ ? घरेलु उपचार यसरी गर्नुहोस्
फागुन १२ ,काठमाडौं । मौसमको परिवर्तन सँगसँगै रुघाखोकीको समस्याले पिरोल्नु सामान्यजस्तै भइसकेको छ। धुँवा र धुलोका कारण उपत्यकावासीमा यो समस्या बाहै महिना देखिँदै आएका छ। विशेष गरेर जाडो र मौसम परिवर्तनका समयमा यो समस्या घेरै मानिसमा…
किन टाउको दुखिरहन्छ ? नखानुहोस् यी खानेकुरा, पुरा पढ्नुहोस !
टाउको दुखाइबाट धेरै मानिसहरु ग्रसित भएको पाईन्छ । अस्तव्यस्त जीवन शैली, अस्वथकर खानपिन जस्ता कुराले मानिसको टाउको दुखाई दिर्घकालिन समस्याको रुपमा देखा परेको पाईन्छ । आधा टाउको दुख्ने, बेलाबेलामा बेस्सरी टाउको दुख्ने, कन्चट दुख्ने, चक्कर…